रबि लामिछाने ‘ को बन्छ करोडपति ‘ पुग्दा यस्तो लफडा ! यस्तो देखियो दृश्य ( भिडियो ) – ThikThak News
May 1, 2019 - LeaveaComment
रबि लामिछानेले आज बुधबार को बन्छ करोडपतिमा सहभागी हुन पुगेका थिए। रास्कोट अस्पतालको सहयोगार्थ भनेर रबि लामिछानेले चर्चित कार्यक्रम को बन्छ करोडपतिमा सहभागी हुन् पुगेका थिए। यो कार्यक्रममा सके सम्म १ करोड रकम नै जित्ने हिसाबले खेल्ने भन्दै यस अघि नै रबि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक मार्फत सबैलाई जानकारी दिसकेका छन्। तर करोड जित्न नसकेपनि जे जति रकम जितिन्छा त्यो सम्पूर्ण कालिकोट को रास्कोट मा निर्माण भैरहेको रास्कोट सामुदायिक अस्पतालका लागि खर्चने जनाइसकेका छन।
रबि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक मार्फत आफ्नो फ्यानहरुलाई कार्यक्रम को फ्री टिकट पाउन फेसबुक मार्फत आग्रह गरेका थिए। २०० जनाका लागि भनेर कार्यक्रम ले फ्री टिकट रहेको जनाइएको थियो। आज कार्यक्रम हुन केहि ढिला हुदा कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका हरुले आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए। करोडपति आयोजकले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेको सहभागीलाई टाढा टाढा पुग्न पर्ने हुन्छा समयको ध्यान नदिएको अति ढिलो गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका थिए। आफुहरुलाई ६ बजे बोलाएपनि कायक्रम ढिला हुदा आफुहरुलाई समस्या परेको बताइरहेका थिए। अघिल्लो कार्यक्रम ले केहि बढी समय लिदा को बन्छ करोड पति पछि सरेको थियो। सहभागी हरुले पानि परिरहदा समेत आफु हरु बाहिर बस्न परेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। त्यस लगत्तै रबि लामिछानेले बाहिर सबै लाइ संयम भएर बस्न आग्रह गरे।
रबि को यसै अस्पतालका लागि अहिले सम्म देश तथा विदेश बाट उदार मनका धनि नेपालीहरुले लाखौको सहयोग गरिसकेका छन् र गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा को बन्छ करोडपति कार्यक्रममा सहभागी बनेर अस्पताललाई रकम जुटाउने काममा रबि लागेका हुन्। रबि लामिछानेको नेतृत्वमा बन्दै गरेको अस्पतालले अहिले सर्बसाधारणलाइ सेवा दिइरहेको छ। हेर्नुस भिडियो मा
भारतसंग झुकेनन वीर नेपाली, सिमानाबाट आयो यस्तो खबर
मिस वर्ल्ड फाइनल प्रतियोगिता हेर्नुस लाइभ ! शृंखलालाई जितको सुभकामना ( लाइभ भिडियो )
नेपालका ११ बर्षीय बालक प्रितमले भारतीय शो सारेगामापामा तहल्का मचाउदै ( भिडियो )
Previous Article सागर आलेले गाए मिठो हिन्दि गीत ‘ लाल इश्क ‘ ( हेर्नुस भिडियो )
Next Article क्रसरले खनेको खाल्डोको पानीमा डुब्दा बालिकाको मृत्यु …